I-SQL Server ne-MS Access Design Yamabhizinisi Insangu ne-Hemp
Nebubi - Development Custom
Uma unganwebeki kahle iphrojekthi yentuthuko, kungenzeka UNGAKUTHOLI okudingayo.
Uma unekhodi yokuphathelene eyenziwe ngumthuthukisi oyedwa (futhi akazange anikeze imibhalo), ukuguqulwa kwekhodi ekhona kungaba nzima.
Kulula ukuyisebenzisa… ngihlangabezane nezinhlelo eziningi “eziphukile” ezakhiwe abasebenzisi bamandla nabanye… bafike ezingeni lapho amakhono abo (noma isikhathi sokufunda) ebenganele kulo msebenzi,
Izixazululo ze-Cloud Database
Izixazululo ze-Cloud ziya ngokuya zithandwa kakhulu, njengoba zivumela abasebenzisi ukuphatha idatha yabo nge-inthanethi, besebenzisa amadivayisi amaningi, ngaphandle kokuhlinzeka ngamaseva, njll ebhizinisini labo lendawo. Iningi lalezi zixazululo lidinga ukwenza ngokwezifiso nohlelo oluthile, noma kunjalo.
Izixazululo Zokuthuthukiswa Kwedatabase Ngokwezifiso
Ngenkathi bobabili i-Access ne-Excel bangenziwa ngezifiso, amabhizinisi amaningi amancane azokhetha ukuhamba nesisombululo semininingwane yangokwezifiso, ngenxa yezidingo zabo zedatha nokuthi badinga kanjani ukuphatha, ukuhlaziya nokusabalalisa imininingwane. Izixazululo ngokwezifiso zivumela amabhizinisi ukuthi akhethe ipulatifomu yawo (iwebhu, ideskithophu, iselula, konke) kanye ne-database yangemuva (Iseva ye-SQL, MySQL, njll)
Buhle - Kungani Usebenzisa i-MS Access
Kuyashesha ukuthuthukisa amafomu, imibiko nemibuzo.
Microsoft kufakwe nabathakathi abaningi ukuqondisa ukwakhiwa kwamafomu nemibiko.
Umbhali omuhle kakhulu wombiko.
Buhle - Ukuthuthukiswa Kwentando
Uthola ngqo okufunayo.Ungasisebenzisa yini isixazululo kuzingxenyekazi nobuchwepheshe obuningi, ngokuya ngemininingwane yakho. Unozakwethu wangaphandle (ama-DBA nama-Programmers) asebenzisana nawe ukwenza isiqiniseko sokuthi yonke into iyasebenza… lokho okukhethekile kwabo.
Sengivame ukuhlangana nabantu besebenzisa i-MS Excel yokuphathwa kwedatha, futhi ngenkathi ingasebenzela uhlu oluncane, njll., Ngokuvamile ayifanele ukugcina idatha.
Buhle - Kungani Usebenzisa i-MS Excel
Kulula ukusetha nokusebenzisa.
Ukuhlaziywa kwakhiwe ku-Excel.
Kulula ukugcina nokusabalalisa.
Nebubi - Kungani UNGAYisebenzisi i-MS Excel
Amandla wabasebenzisi abaningi anqunyelwe (yebo, UNGABE nabantu abaningana abafinyelela kufayela elifanayo ngasikhathi sinye, kepha lokhu akuwona umqondo omuhle ukurekhoda izingqinamba zokukhiya).
Kungaba nzima ukusetha amafomu wokufaka idatha aqinile ngaphandle kolwazi oluhle lwe-VBA (Visual Basic for Applications). Isitoreji sedatha asihlukani nekhodi nokuhlaziywa.
Ayikulungele kahle ukunikezela ngemininingwane kumawebhusayithi (uma isetshenziswa njengomthombo wedatha, hhayi nje njengesixhumanisi sokulanda).